Hari Prasad Bhandari Archives - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
Tag Archives: Hari Prasad Bhandari
कथा : जागरण
~हरिप्रसाद भन्डारी~ ऊ भोक र थकाइले लखतरान परेर कोठाभित्र पस्यो । लौरो भित्तामा अडायो, टोपी फुकालेर सुइया सुस्केरा हाल्दै खाटको छेउमा बस्यो । बत्तिको मधुरो प्रकाशमा कोठा मलिन देखिन्थ्यो । एकपट्टि कुनामा सात दिनकी सुत्केरी स्वास्नी सुतेकी थिई भने अर्कोपट्टि … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
विधा : नेपाली कथा	| Hari Prasad Bhandari	| प्रतिकृया छोड्नुहोस्
कथा : फैसला
~हरिप्रसाद भन्डारी~ असार महिनाको आधा आधी, झमझम पानी पर्नु पर्ने बेला भए तापनि पानी पटक्कै परेको थिएन । लामो खडेरीले सताएर आकुलव्याकूल पारे पनि त्यसको कुनै पर्वाह नगरी गाउँलेहरूले कस्सिएर खेतबारीमा काम गरिरहेका थिए । चर्को गर्मीले गर्दा शरीरबाट तरतरी … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : मृत्युको घण्टी
~हरिप्रसाद भण्डारी~ जङ्गलमा एउटा उद्दण्ड सिंह बस्थ्यो। “म यो वनको राजा हुँ, मेरो आदेश सबैले पालना गर्नुपर्छ। उसको आदेश कडा हुन्थ्यो। जनावरहरूको जथाभावी हत्या गर्नु उसको शोखको विषय थियो। कसको कुन बेला काल आउने हो, कुनै ठेगान थिएन। यसले गर्दा … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
विधा : लघुकथा	| Hari Prasad Bhandari	| प्रतिकृया छोड्नुहोस्
~हरिप्रसाद भण्डारी~ धेरैले यसै भन्थे। एउटा अनिवार्य यात्रा, शिखरमा पुग्नका लागि हिँडिरहेका थिए यात्रीहरू। थाक्ने पछि पर्थे र हिँड्नेहरू हिँडिरहन्थे, निरन्तर। कहिले भीरको बाटो, कहिले जङ्गलको बास। यात्रा कहाँ हुन्छ र सुगम ! चितुवा र ब्वाँसाको झम्टाइ, तीखा ढुङ्गा र … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : पूजा
~हरिप्रसाद भण्डारी~ ऊ गाउँमा जन्मे हुर्केको भए पनि सहरमा पसेपछि छिटै उन्नति गर्‍यो— धेरै धन कमायो र सहरमा ठूलो घर बनायो। सबै कुराले सम्पन्न भएपछि बा–आमाको सम्झना भयो। सहरमै ल्याएर पाल्ने विचार गरेको थियो, तर बा–आमाले सहरमा भन्दा गाउँमै बस्न … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : काला सर्पको खोजी
~हरिप्रसाद भण्डारी~ सानी छँदा एकान्त पारेर एउटा सर्पले उनलाई झम्टियो । डसाइबाट जोगिन उनले सक्दो प्रयास गरिन् । लुगा च्यातिए, शरीर चिथोरियो तैपनि उसले छोडेन । आफ्नो सबै बिष उनीमाथि खन्याएपछि सर्प त्यहाँबाट भाग्यो । उनी रक्ताम्य अबस्थामा रुँदै घरमा … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : कुलतको जाल
~हरिप्रसाद भण्डारी~ आफन्तहरूको दिनदिनैको कचकच सुनेपछि उसले रक्सी नपिउने निधो गर्‍यो । “भोलिदेखि खाइन्न क्यारे, ले माइली अझै एउटा थप ।” लरबरिएको स्वरमा भन्यो र रित्तो गिलास उठाएर एकपटक टेबुलमा ठोक्यो । “यी पाजी नेताहरूले माक्र्सवाद बुझेकै छैनन्, काँग्रेसीहरू पनि … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : चोरीको रिपोर्ट
~हरिप्रसाद भण्डारी~ उसको प्रमुख पेशा चोरी थियो । चोरीको काम दिन, रात, साँझ, बिहान जतिखेर पनि हुन्थ्यो तर पनि उसले रातिको समयलाई नै अनुकुल ठान्थ्यो । अरु समयमा सम्भाव्यता अध्ययन गर्थ्यो । अनुकूल स्थान भेटेपछि राति गएर झ्याप पार्थ्यो । … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : म मरिसकेँ
~हरिप्रसाद भण्डारी~ “को छ भित्र?” महाकवि देवकोटाका घरअगाडि पुगेर कवि केदारमान व्यथितले सोधे। “को हो? हामी छौँ, माथि आउनुहोस्।” भित्रबाट नारी आवाज आयो। कवि व्यथित केही गुनगुनाउँदै भित्र पसे र सिँढी उक्लदै तलामा गए।
लघुकथा : बेग्लाबेग्लै आँखा
~हरिप्रसाद भण्डारी~ दुईजना पत्रकार सडकको किनारमा रहेको चियापसलमा बसेर चिया पिइरहेका थिए। एक्कासि सडकतिरबाट आएको हल्लाले उनीहरूको ध्यान पनि उतै मोडियो। वरपरका मानिसहरू छिटो छिटो आवाज आएतिरै गइरहेका थिए। ती पत्रकारहरू पनि बसेको ठाउँबाट उठे र सडकतिरै लागे। उनीहरूले देखे― … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : मेरी चेली प्रतिमा
~हरिप्रसाद भण्डारी~ मलाई एउटा कथा लेख्नु जरुरी थियो र म त्यसैका खोजीमा हिडिरहेको थिएँ। मलाई थाहा थियो, मैले खोजेको कथा कुनै बगैचा वा नदीका किनारमा भेटिदैन भन्ने कुरा, त्यसैले म गाउँ, शहर र गल्लीहरूमा घुम्दै थिएँ कथा खोज्न। कथा खोज्दै … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : ओखती
~हरी प्रसाद भण्डारी ~ गाउँमा स्वास्थ्यउपचार टोली खटिएको थियो र गाउँलेहरु शिविरमा जम्मा भएर उपचार गराइरहेका थिए । त्यस्तैमा पल्लो गाउँमा एक परिवारका सातैजना सिकिस्त बिरामी छन् रे र शिविरसम्म आउन पनि सक्दैनन् रे भन्ने खबर शिविरमा आयो । ‘उनीहरु … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
लघुकथा : प्रवृत्ति
~हरिप्रसाद भण्डारी~ सहरको केही पर एकान्त स्थानमा एउटा मन्दिर थियो । मन्दिर वरिपरि सानासाना कुटीहरू थिए । कुटीमा योगी, सन्न्यासी तथा पूजारीहरू बस्थे । नजिकै बाक्लो बस्ती भएको हुँदा नियमितरूपमा भक्तजनहरू मन्दिरमा दर्शन गर्न र घुम्न आउँथे । मन्दिर परिसरको … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →
कथा : संजोग
~हरिप्रसाद भण्डारी~ म ब्यूँझदा मैले आफूलाई अस्पतालको बेडमा पाएँ । अचम्म लाग्यो मलाई । म किन र कसरी त्यहाँ पुगेँ भन्ने कुरा मेरा दिमागले ठम्याउन सकिरहेको थिएन । त्यसबेला मेरो सारा शरीर दुखिरहेको थियो । टाउको गह्रौं भइरहेको थियो । … पढ्नेक्रम जारी राख्नुहोस् .. →